နို့ကိုအလေးမထားသောကြောင့်အဘယ်ကြောင့်မကောင်းသနည်း - အလေးချိန်
အဓိက > အလေးချိန် > နို့ထွက်ပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်သင်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေသည့်အပြင်မည်သို့ဖြေရှင်းရမည်နည်း
အားလုံးဟိုင်း! ငါအမျိုးသမီးများအတွက် ATHLEANXX မှ Amy Jo သင်တန်းပို့ချသူဖြစ်ပြီး၊ ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အဆီဆုံးရှုံးမှုအတွက်အဆိုးဝါးဆုံးအစားအစာငါးမျိုးအကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ငါတို့သိတဲ့အတိုင်းသကြားဓာတ်၊ ကယ်လိုရီများတာကမင်းရဲ့အင်ဆူလင်ကိုတိုးစေတယ်။ သင့်ရဲ့အဆီဆုံးရှုံးမှုအတွက်မကောင်းဘူးဆိုတာငါတို့သိတယ်။
သို့သော်ငါထင်သောအရာများနှင့်အလေ့အထများနှင့်သင်မည်သို့စားသည်ကိုသိခြင်းနှင့်အရေးကြီးသောအချို့သောအရာများကိုလေ့လာကြည့်ကြစို့။ သကြား၊ သကြား၊ ကယ်လိုရီများလွန်းခြင်း၊ အဆီများလွန်းခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့အာရုံစူးစိုက်ရန်လိုအပ်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ကားအဘယ်နည်း။ ပထမ ဦး စွာချစ်ပ်များသို့မဟုတ်သကြားလုံးဘူးများသို့မဟုတ်အဆီနှင့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်များနှင့်သကြားပါ ၀ င်သည့်အရာကဲ့သို့သောပေါင်းစပ်ထားသောအစားအစာများကိုစဉ်းစားပါ။ ဤအပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြင်းထန်သောသူများကိုပေါင်းစပ်ခြင်းသည်သင့်ကိုမဖြည့်နိုင်ပါ။
ဒီဟာကိုသင်နှစ်ကိုက်၊ သုံးခု၊ လေးခုလောက်စားမယ်၊ ဒါကအဆီဆုံးရှုံးဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါသင်အမှန်တကယ်ရှောင်ရှားလိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ သင်ဤအစားအစာအမျိုးအစားများမှအဆီမဆုံးရှုံးနိုင်ပါ၊ သို့သော်သင်တစ်ချိန်တည်းအစာတစ်ခုတည်း၌အဆီနှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်ကိုစားသုံးပါက၊ သင်အမှန်တကယ်အတွက်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ကြောင်းနားလည်ရန်အလွန်ကောင်းသည့်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။ ရှောင်ကြဉ်ရန်နံပါတ်တစ်အစွန်အဖျား။
နံပါတ်နှစ်ကအရက်ပါ။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သိသည်နှင့်အညီ၊ မြေတပြင်လုံး '' ဘီယာဝမ်း '' ။
အစစ်ကိုရှောင်ပါ။ ဒါဟာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကွဲပြားခြားနားဓာတ်ပြုပါသည်။ ၎င်းသည်သင်၏သွေးတွင်းသကြားဓာတ်ကိုတိုးစေပြီးခန္ဓာကိုယ်အဆီပိုမိုများပြားစေသည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်မဟုတ်ပါ။
ဒါကြောင့်အရက်ကိုရှောင်ကြဉ်ပါ။ နောက်တစ်ခုကအစားအစာအိတ်များဖြစ်သည်။ Costco အိတ်၏အရွယ်အစား - ကြီးမားသည် - သင်ဖွင့်လှစ်။ နက်နဲသောအပေါက်တစ်ခုရှိသည်။
ဒါကမင်းကိုငါကမ်းလှမ်းမယ့်နောက်ထပ်အကြံဥာဏ်တစ်ခုပဲ၊ ဒါကဒီလိုမျိုးအစားအစာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းကမရပ်နိုင်ဘူး၊ အိတ်ကြီးကြီး၊ ဖွင့်လိုက်တာ၊ အရွယ်အစားထိန်းချုပ်မှုမရှိဘူး။ ဒါကြောင့်မင်းကမင်းထင်တာထက်ပိုပြီးစားဖို့ခွင့်ပြုနေတယ်။ ထို့ကြောင့်အိတ်ကြီးများကိုရှောင်ပါ။
မင်းဒါကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ပြန်သွားစရာမရှိဘူး။ နံပါတ်လေး၊ အဆီမရှိတဲ့အရာ။ အဆီမပါသောရေခဲမုန့်၊ အဆီကင်းကွတ်ကီးများကဲ့သို့၊ ဤအရာအလုံးစုံတို့ကိုငါတို့သည်ဆင်ခြင်။ ၊
မင်းငါ့အတွက်ပိုကောင်းတယ် 'ကောင်းပြီ၊ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမင်းကတစ်ယောက်ထက်ပိုပြီး၊ နှစ်ခုထက်ပိုပြီးစားရမယ်။ ဒါကငါတို့မသွားချင်တဲ့နေရာပဲ။ ဒါကြောင့်သတိရပါ။ အပြည့်ပါ ၀ င်သည့်အဆီမဟုတ်သောအဆီထုတ်ကုန်များထဲမှတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုကိုသာယူပါ။
သင်္ဘောသဖန်းနယူတန်သို့မဟုတ်ရေခဲမုန့်သည်အချို့သောထိန်းချုပ်မှုများရှိသည်။ သို့သော်အဆီမပါသောသကြားနှင့်ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်အပိုများရှိနိုင်သည်ဟုဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ဤပစ္စည်းများကိုအရသာတိုးမြှင့်လိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်အဆီဆုံးရှုံးမှုအတွက်အဆီမပါတဲ့အစာတွေကိုရှောင်ပါ။
ဒါဆိုမင်းကမင်းရဲ့အင်ဆူလင်ကိုတိုးနေတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကသောက်စရာပါ၊ ဆိုဒါတစ်ဘူးထဲမှာဆိုလျှင် ၄၅ ဂရမ်မှ ၅၀ ဂရမ်သကြားရှိသောကြောင့်သင်၏အဆီဆုံးရှုံးမှုရည်မှန်းချက်များအတွက်အထောက်အကူပြုမည်မဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဖျော်ရည်နှင့်အတူတူပင်။
ငါတို့ကလိမ္မော်သီးဖျော်ရည်လို့ထင်တယ်၊ ငါတို့ကပန်းသီးဖျော်ရည်လို့ထင်တယ်၊ ငါတို့မှာ kale ပါ ၀ င်တဲ့ဖျော်ရည်ဒါမှမဟုတ်ဖျော်ရည်ဘားရှိတာတောင်သင့်အတွက်လုပ်ကောင်းကောင်းလိမ့်မယ်။ သို့သော်သင်သည်နူးညံ့သောလိမ္မော်ရည်သို့မဟုတ်နို့ဆီပန်းသီးဖျော်ရည်ကိုရရှိပါက၎င်းတွင်သကြားဓာတ်များစွာရှိသည်။ ရေကိုသောက်ပါ။
ဆောင်းပါးများစွာအတွက်ညှိထားပါ။ သင်၏ပန်းတိုင်သို့ရောက်ရှိရန်အထောက်အကူပြုမည့်အစီအစဉ်များ၊ အကြံဥာဏ်များနှင့်အစာစားခြင်းအစီအစဉ်များအတွက် ATHLEANXX for Women များအတွက်ကြည့်ပါ။ ကျွန်တော့်ကိုဆက်သွယ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါ Amy Jo ပါ၊ နောက်တစ်ခါတွေ့မယ်
ဘယ်တော့လဲနို့ထွက်ပစ္စည်း, ဖောင်းလျော့နည်းသွားနိုင်ပါတယ်ထွက်ဖြတ်သည်။ အဲဒါကြောင့်ပဲကလူများစွာမှာ Lactase ကင်းမဲ့သည်၊ကနွားနို့ကိုအစာကြေရန်အင်ဇိုင်းလိုအပ်သည်နို့အာဟာရပညာရှင် Frida Harju-Westman က Cosmopolitan ကိုရှင်းပြခဲ့တယ်။ 'အကယ်မင်းရပ်သွားသည်နို့ထွက်ပစ္စည်း,မင်းရှာတွေ့လိမ့်မယ်မင်းရဲ့အစာခြေဖြစ်ကောင်းအောင်, တိုးတက်ကောင်းမွန်မင်းလျော့နည်းဖောင်းခံစားရတယ်။ '
ပျမ်းမျှစားချင်သောသူများတွင်“ gluten-free” ဟူသောစကားလုံးသည်အလွန်ရှုပ်ထွေးစေသည်။ peptides gliadin နှင့် glutenin မှပရိုတိန်းများကိုဂျုံ၊ ဆီလီနာ၊ ကောက်နှင့်မုယောစပါးသီးနှံများတွင်တွေ့ရှိရသည်။ ၎င်းသည်ပေါင်မုန့်ကိုလေထဲပျံ့နှံ့စေသောအရာများပေးပြီး၎င်းအားစေးကပ်သောချောမွေ့မှုကိုပေးသည်ဟုလူသိများသည်။
သို့သော်မကြာသေးမီကအစားအသောက်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များနှင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအသိုင်းအ ၀ ိုင်းများကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေရန်နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင်ဟာ cronut (သို့) ကြက်ဆင်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကိုစားတဲ့အခါတိုင်းသင့်ခန္ဓာကိုယ်က gluten ကိုစားသုံးရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်စေ၊ နောက်တစ်ခုမှာ celiac ရောဂါဟုလူသိများသည်။ Celiac non-celiac gluten sensitivity ဖြစ်သည်။
Gluten ကိုလုံးဝရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည်လက်ရှိတွင်ဤရောဂါများကိုကုသရန်တစ်ခုတည်းသောလူသိများသည့်ကုသမှုဖြစ်သည်။ ကျန်တာတွေကကော။ ရောဂါလက္ခဏာမပြသေးသောကျွန်ုပ်တို့မှ - သင်သည် gluten ကိုခန္ဓာကိုယ်မှအမှန်တကယ်ဘာဖြစ်သွားသနည်း - သင်သည်အရေးကြီးသောအာဟာရများကိုဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ gluten ကိုယ်တိုင်သည်ထူးခြားသောအာဟာရဓာတ်များကိုမပေးနိုင်သော်လည်းပရိုတင်းပါဝင်သောအစေ့တစ်ခုလုံးကိုမကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
သားညှပ်ပေါင်မုန့်နှင့် granola စသည့်ဂျုံနှင့်တွဲဖက်သည့်ထုတ်ကုန်များသည် B ဗီတာမင်နှင့်သံဖြင့်ခိုင်ခံ့စေသည်။ သို့သော်၊ များစွာသော gluten ပါဝင်သောအစားအစာများမှာမူမဟုတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာကောက်ပဲသီးနှံများ၊ အသားညှပ်ပေါင်မုန့်နှင့်ခေါက်ဆွဲများကိုသာစားသောကန့်သတ်ထားသောအစားအစာများကိုစားသုံးသူများအတွက်ဂျုံသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီးသူတို့တစ်နေ့လုံးစားသုံးသောအဟာရအများဆုံးသောအရာဖြစ်သည်။
SugarChecked အက်ပလီကေးရှင်း၏အိမ်တွင်းအာဟာရအာဟာရဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်ပညာရှင်အင်ဒရူးဂျိမ်းစ်ပီယပ်စ်ကအများအားဖြင့် gluten-free diets သည်ဆန်ဖြူ၊ အာလူးနှင့်тапီအိုကာဂျစ်စသည့်အဆင့်မြင့်ပြုပြင်ထားသောအနိမ့်အာဟာရဓာတ်များအပေါ်များစွာမှီခိုနေသည်ဟုသတိပေးသည် မဖြစ်နိုင်ဘူး ဖိုက်ဘာနှင့် gluten- အခမဲ့အစားအစာ၏အခြားအာဟာရလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း။ မြင့်မားသောစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်သည်။ ခဲယဉ်းသောအလုပ်သည်ဗီတာမင်ကြွယ်ဝသောပဲပင်များ၊ ကယ်လစီယမ်များပြားသောအိမ်တွင်းဒိန်ခဲ၊ သံဓာတ်ကြက်ဆင်နှင့်ဗီတာမင်ကြွယ်ဝသောသစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစသည်ဖြင့်ဖြစ်နိုင်သည်။
မင်းကသာယာတဲ့၊ ပျော်နေတဲ့အစာအိမ်ရှိနိုင်တယ်။ သင်ဟာ gluten-free diet ကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်စေ၊ မယုံကြည်သည်ဖြစ်စေကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်အားလုံးဟာသိပ္ပံနည်းကျသက်သေပြနိုင်ပြီးအစေ့တစ်ခုလုံးဟာအစာကြေဖို့အခက်ခဲဆုံးပဲ။ Healthy Home Economist ၏ဘလော့ဂ်တွင်အသိအမှတ်ပြုအာဟာရရှိသောအစာအာဟာရပညာရှင် Monica Corrado မှအစေ့အဆန်သည်အစာစားရန်အတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်သင့်အစာအိမ်ကိုပျက်စီးစေနိုင်သောနည်းလမ်းငါးခုအကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ ကောက်ပဲသီးနှံများကိုယာယီဖယ်ရှားပေးခြင်းဖြင့်အူသိမ်ကိုသက်သာစေသည်။
အားလုံးပါ ၀ င်သည့်သူနာပြုမာဂရက်ရိုမီယိုကသူမ၏လူနာများအစာအိမ်ရောဂါလက္ခဏာများသည် gluten- free dieta ဖြင့်တိုးတက်မှုမရှိကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ celiac ရောဂါမရှိကြပါဘူး။ သူမက The List ကိုပြောတယ်။ အကယ်၍ လူနာမှာရောဂါလက္ခဏာမပြရင်တော့သူတို့ဟာ gluten free diet ကိုမထည့်ဘူး။
သို့သော်ဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ်သဘာဝဓာတ်ငွေ့နည်းနည်းသို့မဟုတ်အမြဲတမ်း ၀ မ်းလျှော / ဝမ်းချုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောအသေးအဖွဲလက္ခဏာများပင် gluten ကင်းသောအစားအစာတွင်ပိုမိုကောင်းမွန်လာနိုင်သည်။ “ မင်းကပိုပြင်းတဲ့အစာအိမ်ကိုစိတ်ဆိုးနိုင်တယ်။ Romero သည် gluten ကိုချန်လှပ်ထားသည့်လူနာများတိုးတက်မှုကိုမြင်သော်လည်းလူတိုင်းအတွက်မတူညီပါ။
US News and World Report မှဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်ပုံမှန်အားဖြင့် gluten-free အစားအစာများ၊ အထူးသဖြင့်ပြုပြင်ထားသော gluten-free အစားအစာများတွင်ဖိုင်ဘာအမျှင်များမပါ ၀ င်ပါ။ ထို့အပြင်ဂျာနယ်အစာအာဟာရဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အရနေ့စဉ်ပုံမှန်အမျှင်ပမာဏကိုမရရှိခြင်းသည်အမေရိကန်လူမျိုး ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းကျော်သည်အရာရာကိုချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်စေသည်။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်အစာမကြေနိုင်သည့်အမျှင်သည်သင်၏ poop ကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးသည်။
US News မှဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်ပုံမှန်အမူအရာများကိုပုံမှန်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ အူမကြီးကင်ဆာကာကွယ်ခြင်းနှင့်ဖော်ရွေသောအူမကြီးဗက်တီးရီးယားများအားထောက်ပံ့ရန်အတွက်ဖိုင်ဘာမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်ကိုကိုးကားထားသည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ အာလူးအခွံများနှင့်ပဲပင်များအားလုံးသည်အမျှင်ဓာတ်၏အခြားရွေးချယ်စရာအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် gluten မပါရှိပါက၎င်းတို့ကိုသိုလှောင်ထားသင့်သည်။ ရောင်ရမ်းခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများဆေးဘက်ဆိုင်ရာသတင်းများသည်ယနေ့တွင်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုခန္ဓာကိုယ်၏အားစိုက်ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရသည့်နေရာကိုပစ်မှတ်ထားရန်ဖြစ်သည်။
တစ်နည်းပြောရရင်ဒါဟာကုသမှုတစ်ခုပါပဲ။ သို့သော်ပြproblemနာမှာအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲရောင်ရမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ နာတာရှည်ရောင်ရမ်းခြင်းသည်အမေရိက၏အင်အားအကောင်းဆုံးပျံ့နှံ့သောရောဂါများဖြစ်သည့်နှလုံးရောဂါ၊ ကင်ဆာ၊ အယ်လ်ဇိုင်းမားနှင့် autoimmune ရောဂါများစွာတို့၏ရင်းမြစ်ဖြစ်သည်။
Romero ၏အဆိုအရ၊ gluten သည်ဓာတ်မတည့်ခြင်းသို့မဟုတ်အထိခိုက်မခံခြင်းရှိသူများ၏ကိုယ်ခန္ဓာတွင်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဖြစ်စေသောကြောင့်သူတို့၏အစားအစာမှ gluten ကိုဖယ်ရှားသောအခါရောဂါလက္ခဏာများသိသိသာသာလျော့ကျသွားကြောင်းသတိပြုမိလိမ့်မည်။ ဤရွေ့ကား, အဖု, IBS ကဲ့သို့အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းပြproblemsနာများ, autoimmunity နှင့်နာကျင်မှု / fibromyalgia ပါဝင်နိုင်သည်။ ထုတ်ယူခြင်း Food Addicts အမည်မဖော်လိုသူအသင်းဝင်များစွန့်လွှတ်သောအရာတစ်ခုမှာ gluten ဖြစ်သည်။
သူတို့ကဂျုံကိုစားခြင်းကမစားရသောအစာကိုဖြစ်စေသည်ဟုသူတို့နားလည်ကြသည်။ Food စွဲလမ်းမှုဌာနမှသိပ္ပံနည်းကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုတစ်ခုအရ Overeaters Anonymous မှစားသုံးသူများသည်ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းကိုအဓိကထားကာဂျုံပါ ၀ င်သောဂျုံအားလုံးနှင့်ဂျုံအားလုံးကိုဖယ်ထုတ်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေခြင်းအားဖြင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းစေခဲ့သည်။ ယုံချင်ယုံမယုံဘူးဒေါက်တာ
Leslie Korn သည် detoxing gluten သည်ဘိန်းဖြူမှထွက်ခွာသကဲ့သို့ခက်ခဲသကဲ့သို့ခက်ခဲနိုင်သည်။ သူမ၏ Nutrition Essentials စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအတွက်အစားအစာ - MoodConnection ကိုအပြည့်အဝလမ်းညွှန်စာအုပ်တွင်သူသည်စိတ်ရောဂါနှင့် gluten sensitivity ခံစားနေရသောလူများ၏အရေးကြီးပုံအကြောင်းပြောထားသည်။ ၎င်းသည်ဤလူများစွာသည်အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ကာအမိုးအကာများတွင်နေထိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ gluten အစားအစာအမှုတော်ကိုထမ်းရွက်။ ပြုပြင်ထားသောအစားအစာစားသုံးမှုကိုဂလူး ၀ င်မှုမရှိသည့်အစားအစာတွင်ကြိုတင်ထုပ်ပိုးထားသော၊ သကြားဖြင့်ထုပ်ထားခြင်း၊ သုတ်လိမ်းထားသော၊ crunchy၊ စေးကပ်သောအချိုမှုန့်ကင်းသည့်အရသာရှိသောအစားအစာများစွာရှိပါသည်။ gluten- အခမဲ့တံဆိပ်ကိုကြည့်ပါ။
ရလဒ်အနေနှင့်သင်၏ထုပ်ပိုးထားသောအစားအစာစားသုံးမှုသည်သင်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ပိုမိုမြင့်မားနိုင်သည်။ ပီယပ်စ်ကဤသို့ဖော်ပြသည် -“ တစ်နေ့တာကုန်ဆုံးချိန်တွင် gluten free cookie သည် cookie တစ်ခုဖြစ်နေဆဲပင်။ ” သို့သော်လူအားလုံးသည်အရောင်အသွေးစုံသည့် gluten free မုန်ညင်းပုံးများကိုမရရှိနိုင်ကြပါ။
အချို့လူများကမီးဖိုချောင်တွင်အချိန်ပိုကုန်ကြသည်၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကြော်၊ သုပ်များကိုခုတ်သည်။ ဒီသက်သေသာဓကဟာဘလော့ဂ်ဂါတော်တော်များများကသူတို့ရဲ့ခရီးကိုမျှဝေသုံးစွဲတဲ့ gluten-free အစားအစာများမုန်တိုင်းတခုဖန်တီးပြီးထွက်လာတာပါ။ Leaky Gut Syndrome မှမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ပါ Nutrition ၏ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားသောလေ့လာမှုတစ်ခုအရသင်၏အူအတွင်းရှိဆဲလ်များသည်မည်သည့်အရာ ၀ င်ရောက်သည်နှင့်အဘယ်အရာရှိနေသည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်ခိုင်မာသောဆက်သွယ်မှုများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သငျသညျလိုလျှင်သူတို့က 'တံခါးစောင့်' ဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည်ရောဂါပိုးများ၊ antigen များနှင့်အဆိပ်အတောက်များကိုဖယ်ရှားပေးသည်။ အာဟာရနှင့်ရေကိုကြိုဆိုသည်။ အကယ်၍ ကောင်းမွန်စွာကုသမှုမခံပါကဤတံခါးစောင့်များသည်၎င်းတို့ကိုသင့်သွေးကြောထဲသို့ ၀ င်ရောက်စီးနင်း။ ပိုးမွှားများ၊ အဆိပ်များ၊ ပရိုတိန်းများနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအစာကြေအစားအစာအမှုန်များကိုခွင့်ပြုသည့်မည်သည့်အရာကိုမဆိုလုပ်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးသောတွင်းများဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။
ဤအရာကိုသိပ္ပံပညာရှင်များက Leaky Gut Syndrome ဟုခေါ်သည်။ ၎င်းသည်အသံကျယ်လောင်နေသော်လည်း PubMed.gov တွင်ထုတ်ဝေသောအခြားလေ့လာမှုတစ်ခုကသင်၏ဆက်သွယ်မှုကိုဖွင့်ထားခြင်းနှင့်သင်၏အူအတွင်းမှပေါက်ထွက်ခြင်းများဖြစ်သည်။
သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည်သင်၏တစ်သျှူးများကိုဂလူးဝင်စ်အဖို့မှားယွင်းစေနိုင်ပြီးနာတာရှည်ရောင်ရမ်းသည့်အခြေအနေတွင်ရှိနေနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသော autoimmune ရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ gluten ကိုမသုံးပါနှင့်။ သင့်စိတ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်နိုင်ဒီသိပ္ပံဆိုင်ရာအထောက်အထားအများကြီးမရှိဘူး၊ ဒါပေမယ့်သက်သေအထောက်အထားတွေကိုအင်တာနက်ပေါ်မှာတွေ့နိုင်တယ်။
Allergic Life နှင့် Entrepreneurs ကဲ့သို့သောသတင်းရပ်ကွက်များအရလူအများစုသည် gluten ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးနောက်တွင်စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းအားရှင်းလင်းခြင်းဟုသတင်းပို့ကြသည်။ ဒီအကြောင်းပြချက်ကဘာလဲ? သူတို့ဟာ gluten ကိုစားနေစဉ် 'ဦး နှောက်မြူ' ရောဂါခံစားခဲ့ရတယ်။ တရားဝင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မရှိသော်လည်းလူတွေက၎င်းကိုပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေသူအဖြစ်ဖော်ပြကြပြီး၊ သူတို့ဟာ gluten ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးပိုပြီးရှင်းလင်းစွာတွေးတောတဲ့အထိသူတို့ရဲ့ဘယ်လောက်အထိခံစားနေရတယ်ဆိုတာကိုမသိခဲ့ကြပါ။
လေ့လာမှုတစ်ခုတွင် gluten ပါဝင်သောအစားအစာနှင့်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများတိုးများလာကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အခြားတစ်ခုကမူသင်တန်းသားများကို gluten သို့မဟုတ် placebo ဆေးကိုပေးသောအခါသူတို့က gluten ပါသည့်ဆေးတောင့်ကိုမျိုချသောအခါသူတို့၏ရောဂါလက္ခဏာများမှာပိုမိုပြင်းထန်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ gluten အတွက်လား၊ gluten အတွက်လား၊ ဒီတော့ gluten ကြောက်ရွံ့တဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ဘာလုပ်သင့်သလဲ။ စားနပ်ရိက္ခာလုပ်ငန်း၌သင်သည်ရှင်းလင်းသောအဖြေမရပါ။
သို့သော်သင်အမြဲအားကိုးနိုင်သောအရာတစ်ခုရှိပါကသင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်။ လက်လှမ်းမမီနိုင်သောအရာသည်မျက်စိကွယ်။ စားခြင်း - အာဟာရဆိုင်ရာတံဆိပ်များသို့မဟုတ်ခံစားချက်များကိုဂရုမပြုဘဲသဘောထားခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ရင်ပူ။ ပူလောင်ခြင်းခံစားရသည်ဟုခံစားရသည်။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညမှာမင်းရဲ့ spaghetti ဟာအစာအိမ်နာနေတာလား။ သစ်ကြံပိုးခေါက်တုံးကိုသစ်ကြံပိုးခုတ်ပြီးတဲ့အခါသစ်ကြံပိုးခေါက်ထက်ပိုကောင်းသလား။ ထို့နောက်သင်၏အစာအိမ်ကိုလိုက်နာပါ။ သူကမင်းကိုဘာလုပ်ဖို့ပြောနေတာလဲ
ထိပ်တစ်ခုနို့ထွက်ထွက်ဖြတ်တောက်ခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများအစာပိုလျှံသောအဆီများ၊ သကြားနှင့်ဆားများကိုသင်၏အစားအစာမှဖယ်ထုတ်ခြင်းဖြင့်သင်၏ကယ်လိုရီစားသုံးမှုကိုလျော့နည်းစေပြီးကျန်းမာသောအလေးချိန်ကိုမြှင့်တင်သည်။နို့ထွက်ပစ္စည်းခန္ဓာကိုယ်၏အက်ဆစ် / အယ်ကာလိုင်းချိန်ခွင်ကိုအနှောက်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အက်ဆစ်အစာအဖြစ်လူသိများသည်။
သကြားဓာတ်သည်သင်၏အစားအစာတွင်လျှော့ချရန်ခက်ခဲနိုင်သည်။ ၎င်းသည်နေရာတိုင်းတွင်စာသားအရ၎င်းကိုသဲသဲမဲမဲထိန်းချုပ်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။ ငါသကြားစွဲလေ့ရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါသိ၏။
ဒီဆောင်းပါးမှာအရူးမပါဘဲသကြားဓာတ်ကိုလျှော့ချဖို့အကောင်းဆုံးအချက် ၁၀ ချက်ကိုငါပြောပြမယ်။ သင်စိတ်ဝင်စားပါကဆက်ကြည့်ပါ။ အားလုံးဟိုင်း! တစ်သက်လုံးပျော်ရွှင်သောဘဝသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိပါ။
ဤအရာများသည်ကျွန်ုပ်တစ်ချိန်ကသကြားစွဲနေခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံမှသင်ယူခဲ့ရသောအရာများဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်ဖောက်သည်များ၏အတွေ့အကြုံများမှလည်းကျွန်ုပ်သင်ယူခဲ့ဖူးသောအရာများဖြစ်သည်။ ဤအရာများသည်မင်းအတွက်အကျိုးရှိမည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည် ငါတို့ထဲမ ၀ င်ခင်မှာငါပြောစရာနှစ်ခုရှိတယ်။
ပထမ ဦး စွာဤဆောင်းပါးသည်အစားအစာတစ်ခုလုံးတွင်တွေ့ရသောသကြားဓာတ်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်မနက်စာစီရီရယ်၊ ပြုပြင်ထားတဲ့အစားအစာတွေ၊ သရေစာ၊ ခရမ်းချဉ်သီးတွေ၊ မုန်လာဥတွေ၊ ပန်းသီးတွေ၊
ဗီတာမင်များနှင့်ဓာတ်သတ္တုများစွာမှာနဂိုအတိုင်းရှိနေသောကြောင့်သဘာဝအစားအစာများမှသကြားများသည်ပြaနာမဟုတ်ပါ။ အဆိုပါပြproblemနာကိုတကယ်သကြားထည့်သွင်းထားသည်။ တစ်နေ့မှာသကြားဘယ်လောက်ထည့်သင့်သလဲ။ ကန့်သတ်ချက်ကဘာလဲ။ ကောင်းပြီ၊ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှာတကယ်ကန့်သတ်ချက်ရှိတယ်။
ဒါဆိုမင်းရဲ့ကန့်သတ်ချက်ကတစ်ရက်ကို ၅၀ ဂရမ်။ သူတို့ကဒီအောက်မှာနေဖို့အကြံပြုပါသည်။ ၎င်းကိုရှုထောင့်တွင်ထည့်ရန်မလွယ်ကူပါ။
မင်းမှာလင်မနိုက်တစ်ဘူးရှိရင် ၄၀ ဂရမ်လောက်ရမယ်။ ဒါ့ကြောင့်သကြားဓာတ်တွေများများစားစားမထားနိုင်တော့ပါဘူး။ ယခုတွင်သင်သည်အမြင့်ဆုံးကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုရှာဖွေနေပါကထောက်ခံချက်သည်တစ်နေ့လျှင် ၂၅ ဂအောက်ဖြစ်သည်။
ယခုသင်အသေးစိတ်နှင့်နောက်ခံအချက်အလက်များကိုသိသောကြောင့်အကြံဥာဏ်များကိုလေ့လာကြပါစို့။ နံပါတ် ၁– သင်၏ပြုပြင်ထားသောအစားအစာအားလုံး၏တံဆိပ်များကိုဖတ်ပါ။ ဒါနဲ့တကယ်တော့ငါကအပြောင်းအလဲနဲ့လုပ်ထားတဲ့အစားအစာတွေအတွက်အရမ်းကိုမပန်ပါဘူး။
ငါအစားအစာတစ်ခုလုံးကိုကပ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းတစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်သည်ပြုပြင်ထားသောအစားအစာများကိုစားရသည်။ သူတို့မှာသကြားတွေများများစားစားမရှိဘူး။ တံဆိပ်များကိုဖတ်ရှုဖို့သင်ယူပါ။
ပါဝင်ပစ္စည်းများစာရင်းတွင်အစားအစာပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသည့်အရာများအားလုံးကိုဖော်ပြထားသည်။ ပထမပါဝင်ပစ္စည်းသည်များသောအားဖြင့်အများဆုံးအသုံးပြုသောပစ္စည်းဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးပါဝင်ပစ္စည်းသည်အနည်းဆုံးပမာဏဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ဒါကြောင့်ပါဝင်ပစ္စည်းများစာရင်းကိုကြည့်ပြီးသကြားကိုဆိုလိုတာပါ။
ပြproblemနာကသကြားမှာနာမည် ၆၀ ရှိတယ်။ သူတို့ကိုငါအကုန်လုံးမသိဘူး၊ မင်းတို့အားလုံးကိုမင်းတို့သိဖို့မမျှော်လင့်ဘူး၊ မင်းကသကြားကိုရှာနေတဲ့အသုံးအများဆုံးစကားလုံးများအောက်မှာဖော်ပြချက် box ထဲမှာရှိတယ်။ ထိုအရည် - ဒါအညိုရောင်ဆန်ရည် ..
Malt ရည်။ ထိုအခါသင်သည်မြင့်မားသော fructose ပြောင်းဖူးရည်ရှိသည်။ ဒါကြောင့်စကားလုံးရည်ကိုရှာဖွေပြီး -OSE တွင်အဆုံးသတ်သောစကားလုံးများကိုလည်းရှာဖွေပါ။ ose ။
ဂလူးကို့စ, fructose, dextrose ။ သူတို့အားလုံးဟာသကြားပါ၊ ဒါကြောင့်သကြားပါတဲ့အစာတွေကိုရှောင်ပါ။ နံပါတ် ၂ - အစားအစာတစ်ခုလုံးပိုမိုစားပါ။
အစားအစာတစ်ခုလုံးသည်သူတို့၏သဘာဝပုံစံဖြင့်ဖြစ်သောအစားအစာများဖြစ်သည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ပဲပင်များ၊ အစေ့များ၊ အခွံမာသီးများ၊ သငျသညျအပေါငျးတို့သအစားအစာများကိုစားသောအခါ, သကြားဓာတ်မထည့်ပါ။
၎င်းသည်ပြုပြင်မထားပါ၊ မည်သူမျှသကြားမထည့်ပါ၊ သင်၏အစားအစာတွင်သကြားပမာဏကိုအလိုအလျောက်လျှော့ချပေးသည်။ နံပါတ် ၃ - မင်းရဲ့ကယ်လိုရီကိုမသောက်ဖို့ကြိုးစားပါ။ သကြားအလွန်များများရရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာ၎င်းကိုသောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့အရမ်းလွယ်တာကအရမ်းလွယ်တာပဲလို့မခံစားရဘူး။ ဒါကြောင့်ငါသောက်တဲ့အခါငါသကြားပမာဏကိုအနီးကပ်အာရုံစိုက်သည်။ ငါကော်ဖီဆိုင်သို့သွားသောအခါ၊ ငါကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကော်ဖီအေးစက်သို့သွားသောအခါအချိုရည်မချိုသောအရသာရှိရန်ငါကြိုးစားသည်၊ သင်သည်ပုလင်းအချိုရည်များ ၀ ယ်သောအခါအချက် ၁ ကိုသတိရပါ။ အရမ်းdတံဆိပ်ခဲ့နားလည်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မင်းရဲ့ကယ်လိုရီတွေအားလုံးကိုသကြားနဲ့မသောက်မိဖို့ကြိုးစားပါ။ နံပါတ် ၄ - သဘာဝချိုမြိန်စေသည့်ပစ္စည်းများကိုမသယ်ဆောင်ပါနှင့်။ ထိုအခါငါတစ်စုံတစ် ဦး ကငါ့ကိုပြောပြခဲ့အလိုရှိ၏
ငါသကြားဓာတ်မြင့်တဲ့အစားအစာကနေသကြားဓာတ်နည်းတဲ့အစားအစာကိုပြောင်းတဲ့အခါငါသကြားဖြူကိုသုံးပြီးအုန်းသီးသကြားဓာတ်၊ ငါပျားရည်ကိုသုံးတယ်။ ငါအညိုရောင် ream ရည်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ငါဒီသဘာဝအချိုဓာတ်အားလုံးကိုသုံးပြီးဘာကိုခန့်မှန်းလဲ။ ငါအခြေခံအားဖြင့်ငါ့အဖြူသကြားစွဲကိုသဘာဝသကြားစွဲလမ်းဖြင့်အစားထိုးလိုက်သည်။ ငါကသကြားစွဲနေတုန်းပဲ၊ ယခုသင်သည်သဘာဝသကြားဓာတ်ဘယ်သောအခါမျှမရနိုင်ဟုပြောနေခြင်းမဟုတ်ပါ။
သကြားဟာအလွန်အာရုံစိုက်ထားတယ်၊ လတ်ဆတ်တဲ့သစ်သီးတွေကိုစားတာကမင်းရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုသတိရပါ။ နံပါတ် ၅။ ပရိုတင်းဓာတ်များများစားပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အစားအစာတိုင်းနှင့်ပရိုတိန်းအလုံအလောက်မရရှိပါကသင်၏သကြားဓာတ်သည်အနည်းငယ်နည်းပါးသည်။
ဒါကြောင့်မင်းတို့နံနက်စာစားနေတယ်ဆိုပါစို့၊ ဒါကနို့နည်းနည်းနဲ့သကြားသီးနှံပါ၊ နံနက် ၈ နာရီဝန်းကျင်မှာထွက်လာပြီဆိုတော့နံနက် ၇း၃ နာရီဝန်းကျင်မှာဖြစ်သည်။
ည ၁၀း၃၀ ဆိုလျှင်သင်ဆာလောင်နေလိမ့်မည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မင်းရဲ့နံနက်စာမှာပရိုတင်းဓာတ်လုံလောက်ခြင်းနှင့်သကြားဓာတ်များလွန်းခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်မင်းရဲ့သွေးသကြားဓာတ်မြင့်တက်သွားတယ်။ ပြီးတော့မင်းကအဲဒီလိုမျိုချလိုက်ပြီးလမ်းတစ်လျှောက်မှာအဲဒီသကြားဓာတ်ကိုလိုချင်တောင့်တတာကိုရှောင်ရှားချင်တယ်ဆိုရင်၊ အစားအစာတိုင်းနဲ့ပရိုတင်းဓာတ်လုံလောက်စွာရယူတာကကောင်းပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အစားအသောက်အနည်းဆုံး ၁၅-၂၀ ဂရမ်ခန့်ကိုကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
အကယ်၍ သင်သည်တစ်နေ့တာလုံးသင်၏ပရိုတိန်းကိုစားသုံးပါကသင်၏သကြားဓာတ်ပမာဏသည်တည်ငြိမ်နေပြီးသင်၌ထိုစွဲမက်စရာများမရှိတော့ပါ။ နံပါတ် (၆) အဆီပိုစားပါ၊ ၎င်းသည်ပရိုတင်းဓာတ်များများစားခြင်းနှင့်ညီမျှသည်။ ဒီတော့အခြေခံအားဖြင့်၊ မင်းတို့အစားအစာအားလုံးအတွက်အဆီလုံလောက်စွာစားမယ်ဆိုရင်၊ မင်းရဲ့သွေးသကြားဓာတ်ဟာတည်ငြိမ်နေပြီးမင်းကပိုပြည့်နေလိမ့်မယ်။
ဒါကြောင့်မင်းဆီကအရာမဟုတ်ဘဲအစားအစာရင်းမြစ်တစ်ခုလုံးကနေအဆီတွေကိုစားဖို့အကြံပြုလိုတယ်။ သငျသညျအပေါငျးတို့သအစားအစာရင်းမြစ်များမှအဆီရှိသည်, သင်အမှန်တကယ်အစားအစာတွေအများကြီးရတဲ့နေကြသည်။ ဥပမာတစ်ခုပေးပါ ဦး ။
သင်ဟာထောပတ်သီးဆီကိုထောပတ်သီးနဲ့နှိုင်းယှဉ်နေတယ်ဆိုပါစို့။ ထောပတ်သီးဆီသည်စင်ကြယ်သောအဆီမျှသာဖြစ်သော်လည်း၎င်းတွင်အဆီမရှိပါ။ ဒါပေမယ့်ထောပတ်သီးမှာဗီတာမင် B၊ ဗီတာမင်အီး၊ ဗီတာမင်အီးနဲ့ဖိုင်ဘာတွေပါရှိတယ်။
ဒါကြောင့်သင်ဟာဆီကိုမဟုတ်ဘဲထောပတ်သီးကနေသင့်ရဲ့အဆီကိုရရှိရင်မင်းရဲ့ပိုက်ဆံအတွက်အာဟာရတွေအများကြီးရနေပြီ။ သင်၏အစားအစာများတွင်ဖြစ်နိုင်သမျှအစားအစာများကိုအတတ်နိုင်ဆုံးကပ်ရန်ကြိုးစားပါ။ ဒါကြောင့်သင်ဟာထောပတ်သီး၊ အခွံမာသီး၊ အစေ့၊ အုန်းသီးစတာနဲ့စားနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အဆီများကန့်သတ်။ နံပါတ် ၇ ။ အခုသင်၌သင်၏ဗီရိုထဲတွင်သကြားဓာတ်များရှိပါက၎င်းတို့ကိုထိုနေရာတွင်စားသုံးရန်ပိုများသည်။
အကယ်၍ သူတို့သည်သင့်အိမ်၌မရှိလျှင်သင်သည်သကြားဓာတ်များများစားစားမရှိတော့ပါ။ ဒီတော့ဒါကသဘောမကျ၊ သင်သည်အဝတ်အစားမဝတ်ရန်၊ သင်၏ကားထဲသို့ ၀ င်ရန်နှင့်သကြားလိုချင်သည့်အခါကုန်စုံဆိုင်သို့သွားရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။
ဒါကကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ထပ်အချက် - ၈။ သကြားဓာတ်ကိုမစားရလို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်မပျော်နိုင်ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါကြောင့်ငါအိမ်မှာသကြားဓာတ်နည်းတဲ့သရေစာရှိဖို့အကြံပြုလိုတယ်။
၎င်းကိုသင်ကူညီလျှင်လတ်ဆတ်သောအသီးများကိုသင်ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သိုထားနိုင်သည်၊ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံသင်အနည်းငယ်ပိုလိုချင်သည်။ သင်လုပ်နိုင်တာတစ်ခုကတော့အေးခဲနေသောစပျစ်သီးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်စပျစ်သီးဟာမူလကအလွန်ချိုမြိန်ပါတယ်။ ပြီးတော့သူတို့ကိုအေးခဲအောင်လုပ်တဲ့အခါသူတို့ဟာလုံးဝကွဲပြားခြားနားတဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုယူပြီးပိုသာယာလာတယ်။
အခုတော့အေးခဲနေသောစပျစ်သီးများကိုသင်အေးခဲနေသောငှက်ပျောသီးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ တကယ်တော့သင်ကတုတ်ပေါ်မှာအေးခဲနေတဲ့ငှက်ပျောရေခဲမုန့်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မှည့်သောငှက်ပျောတစ်ကောင်ကိုယူပြီးအခွံခွာပြီး popsicle တစ်ခုထည့်ထားပါကသင် popsicle ကိုအသုံးပြုစရာမလိုပါ။
သူတို့ကိုရေခဲသေတ္တာထဲ ၂၄ နာရီထားပါသို့မဟုတ်လုံးဝတင်းမာသည်အထိထားပါ။ နောက်တစ်နေ့တွင်သင်သည်သကြားကိုလိုချင်သောအခါသင်အမှန်တကယ်အေးခဲနေသောငှက်ပျောသီးကိုယူပြီးအရည်ပျော်သောချောကလက်အနည်းငယ်ထဲသို့နှစ်ပြီးလျှင်၊ ဖျက်စီးထားသောအုန်းသီးအချို့ကိုထည့်ပြီးသင်တစ်ချောင်းတွင်အေးခဲနေသောငှက်ပျောသီးရေခဲမုန့်တစ်ခုယူနိုင်သည်။ အသီးများတယ်၊ အုန်းမှကျန်းမာသောအဆီရှိပြီးချောကလက်အမည်းရောင်ရှိသည်။
မင်းဒါမှားသွားလို့မရဘူး နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုမှာပန်းသီး nachos ဖြစ်သည်။ ဒီဆောင်းပါးရှည်လျားလွန်းလို့ဒီကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာငါအတိအကျမပြောတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့်အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဖော်ပြချက် box ထဲမှာ link တစ်ခုထည့်မယ်။
နံပါတ် ၉။ စိတ်ဖိစီးမှုသက်သာစေရန်သကြားကိုမသုံးပါနှင့်။ ငါအင်ဂျင်နီယာလုပ်ခဲ့တုန်းကငါကသကြားအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါအရမ်းစိတ်ဖိစီးမှုခံခဲ့ရသည်နှင့်သကြားငါစိတ်ဖိစီးမှုသက်သာရာတစ်ပုံစံအဘို့ငါသိမ်းယူပထမ ဦး ဆုံးအရာဖြစ်ခဲ့သည်။
သကြားကသင်၏စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ကိုလျှော့ချပေးသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်ရေတိုဖြေရှင်းချက်မဟုတ်ဘဲရေရှည်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏စိတ်ဖိစီးမှုကိုကိုင်တွယ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာအစားအစာမှမဟုတ်ဘဲသကြားဓာတ်ဖြင့်မဟုတ်ဘဲအခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ဖြစ်သည်ကိုနှစ်များတစ်လျှောက်ငါနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့သည် တွေးတောဆင်ခြင်ခြင်း၊ ယောဂပြုလုပ်ခြင်း၊ ပန်းခြံထဲတွင်လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ရေချိုးခြင်းကိုပြုလုပ်သောအရာ၊ သင့်အတွက်အကျိုးရှိမည့်အရာများ။
သင်၏စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ကိုလျှော့ချမည့်မည်သည့်အရာမဆိုပြုလုပ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ငါစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူစိတ်ဖိစီးမှုဆန့်ကျင်ငါတကယ်ရှာတွေ့သောအရာတစျခုမှာကိုယ့်ကိုကိုယ်စောင့်ရှောက်မှု။ ငါ့မှာတကယ်တော့ဆောင်းပါးရှိတယ်၊ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ဖော်ပြချက်ကွက်လပ်မှာချိတ်ထားလိမ့်မယ်။
သကြားကိုအနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ချဉ်းကပ်နည်းဖြင့်ပြproblemနာမှာ၎င်းသည်ရေရှည်တွင်အလုပ်မလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘဝဟာမျှတမှုကိုရှာဖွေဖို့ပါ။ အခုတော့မင်းကသကြားဓာတ်ကိုအတော်အသင့်စားသုံးသင့်တယ်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူး၊
အလယ်အလတ်ဇုန်တွင်နေရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်အခါအားလျော်စွာသကြားဓာတ်ရှိခြင်းသည်ပြproblemနာမဟုတ်ပါ။ ဥပမာတစ်ခုပေးပါ ဦး ။
ဒါကမင်းရဲ့အဘွားရဲ့ ၉၀ ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပြီးသူမကိတ်မုန့်ဖုတ်တယ်။ အားလုံးသူမ၏တစ် ဦး တည်းမွေးနေ့။ အဲဒါကိုမလုပ်ချင်ဘူးလား။ ငါတော့မထင်ဘူး။
ဒီအထူးအခါသမယကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကတစ်ချိန်ကကိတ်မုန့်တစ်လုံးလုံးကိုမျှတစေတဲ့အခါသမယတစ်ခုပါ။ အဲဒါကိုတစ်ယောက်ယောက်ကိုသင်မျှဝေနိူင်တယ်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သကြားရှိခြင်းသည်အဆင်ပြေပါသည်၊
အစားအစာအပါအ ၀ င်ဘဝရှိအရာများသည်မျှတမှုကိုရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင့်အတွက်အကျိုးရှိမည့်ဟန်ချက်ကိုရှာဖွေပါ။ ဆောင်းပါးကိုသင်ကြိုက်နှစ်သက်ပြီးအသစ်တစ်ခုကိုလေ့လာခဲ့လျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုမည်သို့ခံစားရစေကြောင်းနှင့်စာပေးသွင်းရန်မမေ့ပါနှင့်၊ အကယ်၍ သင်သည်စာရင်းသွင်းလျှင်ပျော်ရွှင်သောဘဝတစ်ခုလုံးကိုအပတ်စဉ်ရရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းကိုလက်မလျှော့ပါနှင့်။ ကျန်းမာရေး၊ အာဟာရ၊ အနည်းဆုံး၊ လူနေမှုပုံစံစတဲ့အကြောင်းဆောင်းပါးတွေကိုကျွန်တော်ဖန်တီးခဲ့တယ်။
ဒါဟာသုံးပတ်အထိကြာပါတယ်နို့ထွက်ပစ္စည်းအပြည့်အဝရန်မင်းရဲ့ system ကိုထားခဲ့ပါသငျသညျအစာစားရပ်တန့်ပြီးနောက်က။ ရလဒ်များကိုရက်အနည်းငယ်အတွင်းသင်တွေ့မြင်နိုင်သည်ကသည်အထိအပြည့်အဝသုံးပတ်ကြာနိုင်ပါသည်သင်၏စနစ်သန့်ရှင်းတယ်
ကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံးဆောင်းပါးမှာတော့ပရိုတင်းဓာတ်ဖြည့်စွက်ဆေးဟာခုခံအားလေ့ကျင့်မှုအတွက်အကျိုးရှိစေမလားဆိုတာကြည့်ခဲ့တယ်။ လူတွေမျှော်လင့်ထားသလောက်မများရင်တောင်အကျိုးကျေးဇူးအချို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြလိုက်ပြီ။ သို့သော်ပရိုတင်းအမှုန့်သည်ကိုယ်ခန္ဓာအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်ပါသလား။ ဒီနေ့ပရိုတင်းဓာတ်မြင့်မားတဲ့အစားအစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုံစိုးရိမ်ပူပန်မှု ၃ ခုရဲ့နောက်ကွယ်ကသိပ္ပံပညာကိုလေ့လာကြည့်ပါမယ်။ ပရိုတင်းဓာတ်မြင့်မားတဲ့အစားအစာကကျောက်ကပ်ပျက်စီးစေနိုင်တယ်၊ ဆံပင်ကျွတ်တာမြန်စေနိုင်တယ်၊
ရဲ့ချက်ချင်းသို့ရကြပါစို့ နံပါတ် ၁ - မြင့်မားသောပရိုတင်းဓာတ်ပါသောအစားအစာသည်လုပ်သလော။ ကျောက်ကပ်၏အဓိကအလုပ်မှာအရည်များနှင့်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့၏သွေးကိုစစ်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေးကိုတိုင်းတာသည့်နည်းတစ်နည်းမှာစစ်ထုတ်သည့်နှုန်းကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျောက်ကပ်အတွင်းစီးဆင်းမှုကိုတိုင်းတာသည်။ ကျန်းမာသောကျောက်ကပ်တစ်ခုတွင်စစ်ထုတ်မှုနှုန်းသည်မြင့်မားနေသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သွေးအတွင်းရှိအဆိပ်အတောက်များသို့မဟုတ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုအသွေးမှချက်ချင်းဖယ်ထုတ်ပစ်နိုင်သည်။
ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှုရှိသည့်လူများတွင်စစ်ထုတ်မှုနှုန်းသည်လျော့နည်းသွားပြီးစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုကျောက်ကပ်တွင်သိုလှောင်ရန်အန္တရာယ်ရှိသည်။ ပရိုတိန်းလှုပ်ခြင်းကဲ့သို့သောပရိုတင်းဓာတ်မြင့်မားစွာစားသုံးခြင်း ၁ နာရီအတွင်းကျောက်ကပ်စစ်ထုတ်မှုနှုန်းသည် ၃၀% အထိတိုးများလာသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှုရှိနှင့်ပြီးသားသူများအနေဖြင့်ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိခြင်းနှင့်ရေရှည်တွင်ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းသည်ပိုမိုဆိုးရွားလာနိုင်သည်။
၎င်းသည်ပရိုတိန်းလှုပ်ခြင်းကကျောက်ကပ်ပျက်စီးစေသည့်သီအိုရီ၏မူလဖြစ်သည်။ ပရိုတင်းဓာတ်မြင့်မားသောအစားအစာသည်ကျောက်ကပ်ပျက်စီးမှုရှိသူများကိုဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေနိုင်သည်ဆိုပါက၎င်းသည်ကျန်းမာသောလူများကိုလည်းဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်ယုတ္တိဗေဒပြိုပျက်သွားသည်။
တစ်စုံတစ်ခုသည်ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျန်းမာသောလူတို့နှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟုမဆိုလိုပါ။ ကျန်းမာသောကျောက်ကပ်တွင်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အလိုက်သင့်ပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိသည်။ လူများသည်ကျောက်ကပ်တစ်မျိုးတည်းဖြင့်သာအသက်ရှင်နိုင်သည်ကိုသင်ကြားကောင်းကြားဖူးပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်ကျန်းမာသောကျောက်ကပ်သည်ပိုမိုမြင့်မားသောပမာဏကိုအလွယ်တကူလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေနိုင်ပြီးအကျိုးဆက်များမရှိဘဲ ၂၀၁၈ ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလတွင်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။
သုတေသီများသည်ပရိုတင်းဓာတ်မြင့်မားသောအစားအစာသည်ကျန်းမာသောလူကြီးများတွင်ကျောက်ကပ်၏လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ပုံမပေါ်ပါ။ နံပါတ် ၂၊ ပရိုတင်းဓာတ်မြင့်မားခြင်းကဆံပင်ကျွတ်စေသလား။ အမျိုးသားများတွင်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းသည်မျိုးရိုးဗီဇနှင့် testosterone ဟော်မုန်း၏သက်ရောက်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ယောက်ျားခန္ဓာကိုယ်ရှိ testosterone ဟော်မုန်းအများစုသည်ဝှေးစေ့များနှင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသွေးအတွင်းရှိဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းသို့သွားသည်။
ဤတွင် testosterone ဟော်မုန်းသည် DHT ဟုလည်းလူသိများသော dihydrotestosterone ဟုခေါ်သောမော်လီကျူးတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲသည်။ မျိုးရိုးဗီဇအားဖြင့်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းအန္တရာယ်ရှိသည့်အမျိုးသားများတွင်ဤ DHT သည်ဆံပင်ရှည်သောဆံပင်ရှည်များကိုအလွန်ပါးလွှာသောဆံပင်များထုတ်လုပ်သောသေးငယ်သော follicles အဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသည်။ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းသည်အမျိုးသားများကဲ့သို့ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သော်လည်းသုတေသီများကမူ ၁၀၀% သေချာမသိသေးပါ။
ပရိုတိန်းစားခြင်းနှင့်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်သည်တိုက်ရိုက်သုတေသနပြုချက်ကိုရှာမတွေ့သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤမေးခွန်းအတွက်တိကျသောအဖြေများမရနိုင်ပါ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့ကြည့်နိုင်သောအရာတစ်ခုမှာပရိုတိန်းစားသုံးမှုကြောင့် testosterone ဟော်မုန်းပမာဏမြင့်တက်လာခြင်းရှိမရှိ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ testosterone ဟော်မုန်းတိုးလာတာနဲ့အမျှပရိုတိန်းစားတာကမျိုးရိုးဗီဇဖြစ်နေတဲ့လူတွေအတွက်ဆံပင်ကျွတ်တာကိုပိုဖြစ်စေတယ်။
ထိုမေးခွန်းကိုဖြေရန်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဟော်မုန်းပမာဏအပေါ်ပရိုတိန်းဖြည့်စွက်ခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုကြည့်ရှုသည့်လေ့လာမှုအနည်းငယ်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။ လေ့လာမှုနှစ်ခုစလုံးကပရိုတင်းသည်စားသုံးမှုတွင် testosterone ဟော်မုန်းပမာဏမပါရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဤသည်ကိုအဘယ်သူမျှမအားဖွငျ့အပြီးသတ်သောသက်သေအထောက်အထားဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်၎င်းသည်ပရိုတိန်းစားသုံးခြင်းသည်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းအပေါ်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုမရှိနိုင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
သိပ္ပံပညာသည်ဤအချက်နှင့် ပါတ်သက်၍ သိသာထင်ရှားမှုမရှိသောကြောင့်သင်အခြားလူများသိရန်အသုံးဝင်မည့်အတွေ့အကြုံရှိပါကမှတ်ချက်များကို ကျေးဇူးပြု၍ တင်ပါ။ နံပါတ် ၃ - ပရိုတိန်းဓာတ်မြင့်မားစွာပါ ၀ င်သောအစားအသောက်များသည်ဝက်ခြံကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သလား။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ၇၃ ရာခိုင်နှုန်းသောလူများသည်သူတို့၏ဘ ၀ တစ်ချိန်ချိန်တွင်ဝက်ခြံရောဂါခံစားခဲ့ရသည်။ အထောက်အကူပြုသောအချက်များစွာရှိသော်လည်းပရိုတင်းဓာတ်မြင့်မားခြင်းသည်အစားအစာကိုပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သလော။ ဆံပင်ကျွတ်တာနဲ့အမျှပရိုတိန်းစားသုံးမှုနဲ့ဝက်ခြံကိုတိုက်ရိုက်သုတေသနပြုနိုင်ခြင်းမရှိဘူး။
ပရိုတိန်းစားသုံးမှုနှင့်ဝက်ခြံကိုညွှန်ပြနိုင်သောသွယ်ဝိုက်သက်သေအထောက်အထားရှိမရှိကြည့်ရအောင်။ အရေပြားတွင် sebum ဂလင်းများသည်အဏုကြည့်မှန်ပြောင်းအင်္ဂါများဖြစ်ပြီးအရေပြားကိုပုံမှန်အားဖြင့်ချောမွေ့စေသည့် sebum ဟုခေါ်သည်။ ဝက်ခြံတွင် sebum သည်အရေပြားရှိအပေါက်တစ်ခုမှစုဆောင်းပြီး Whitehead သို့ပြောင်းသည်။
sebum ဂလင်း၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောအဓိကဟော်မုန်းအချို့မှာ testosterone၊ DHT နှင့် IGF ဟုလည်းသိကြသောအင်ဆူလင်ကဲ့သို့သောကြီးထွားမှုအချက်ဟုခေါ်သည့်အခြားမော်လီကျူးများဖြစ်သည်။ Testosterone ဟော်မုန်း၊ DHT နှင့် IGF သည် sebum gland များ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုတိုးမြှင့်ပေးသောကြောင့်ဝက်ခြံပိုဆိုးနိုင်သည်။ ပရိုတိန်းသည် testosterone ဟော်မုန်းပမာဏမတိုးစေနိုင်သည့်အတိတ်မှကျွန်ုပ်တို့သိသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကိုပုံထဲမှထုတ်ယူကြပါစို့။
IGF ကောဘယ်လိုလဲ။ ကောင်းပြီ၊ နို့စားခြင်းသည် IGF အဆင့်ကိုမြင့်တက်စေပြီးဝက်ခြံပိုဆိုးစေနိုင်သည်ဟူသောအထောက်အထားအချို့ရှိသည်။ whey protein ကိုစားသုံးသောလူငယ်များတွင်ဝက်ခြံပိုမိုဆိုးရွားလာသည့်အဖြစ်အပျက်များလက်တဆုပ်စာရှိသည်။ ဒါကြောင့် whey ပရိုတိန်းသည်ဝက်ခြံကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။
တနည်းကား၊ ၎င်းသည်သိပ္ပံနည်းကျအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မရှိပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင်တစ်ခုတည်းသောအကြံပြုချက်မှာသင်၌ပြင်းထန်သောဝက်ခြံထွက်လျှင်နို့နှင့် whey မှအပပရိုတင်းအရင်းအမြစ်များကိုစမ်းသပ်အသုံးပြုသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပဲပိစပ်အခြေခံပရိုတင်းသို့မဟုတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပရိုတိန်းများကိုသင်စမ်းကြည့်နိုင်သည်။
သိပ္ပံပညာသည်ဤမေးခွန်းအတွက်ရှင်းလင်းသောအဖြေမရသောကြောင့်အခြားသူများအတွက်အသုံးဝင်မည့်အတွေ့အကြုံရှိပါကမှတ်ချက်များကို ကျေးဇူးပြု၍ တင်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်ကျောက်ကပ်ပျက်စီးခြင်း၊ ဝက်ခြံသို့မဟုတ်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်ပါကသင်၏အခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ သီးခြားဆေးကုသမှုဆိုင်ရာအကြံဥာဏ်များအတွက်သင့်ဆရာဝန်အား ကျေးဇူးပြု၍ ပြောပါ။ ကျွန်ုပ်၏ယခင်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်အစားအသောက်နှင့်နှလုံးကျန်းမာရေးအကြားဆက်နွယ်မှုကိုလေ့လာခဲ့သည်။
သင်ပိုမိုလေ့လာလိုလျှင်ညာဘက်ရှိဆောင်းပါးကိုနှိပ်ပါ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါးသည် YouTube ကိုသင်စစ်ဆေးသင့်သည်ဟုထင်မြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ လာမယ့်ဆောင်းပါး၌ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ကြည့်ရှုခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အစာကြေခြင်းအခက်အခဲရှိသောသူများအတွက်မှုတ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်Lactoseနို့၌သကြား။ ဒါမဟုတ်ပါဘူးနို့ထွက်ဓာတ်ပစ္စည်းနှုန်း se '' ဟု၎င်းကပြောသည်။ ဒါဟာအစာခြေခြင်းကိစ္စ။ မင်းရဲ့ဝမ်းပိုပြီးဖောင်းပွလာနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်ကကိုယ်အလေးချိန်တက်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။
'' သင်စားတဲ့ပိုလျှံတဲ့ကယ်လိုရီအချို့ဟာနို့ထွက်ပစ္စည်းများမှဖြစ်တယ်၊ဖြတ်တောက်ခြင်းသူတို့အားအစားအစာများအပြင်ထွက်မှန်ပါတယ်ပိတ်ထားသည်လင်းနို့သည်သင့်ကိုကူညီပါလိမ့်မည်ဝိတ်ကျ,' သူမကပြောပါတယ်။ မင်းရဲ့ပြိုကွဲမှုဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဒိန်ခဲ, သင်လုပ်နိုင်သည်ဝိတ်ကျရှောင်ရှားခြင်းဖြင့်ဒိန်ခဲသင်သည်အခြားအစားအစာများဖြင့်အစားထိုးခြင်းမပြုပါကကယ်လိုရီနည်းနည်းသာသောက်သုံးပါလိမ့်မည်။ '
တိုးတက်မှုဟာသိသာထင်ရှားလာပါပြီနောက်မှအရေပြားနှင့် ပတ်သက်၍ ၁၂ ပတ်ကြာသော်လည်းမလွယ်ကူပါ။ အပိုဆောင်းသုတေသနပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။၂ ။ 2018 ။
နို့ထွက်ပစ္စည်းထုတ်ကုန်များတွင်ချွဲ - ဖွဲ့စည်းနှင့်ပရိုတိန်းဖြစ်ကြသည်နို့ထွက်ပစ္စည်းသိုင်းရွိုက်ဂလင်းနှင့်အစာခြေလမ်းကြောင်းကဲ့သို့သောကိုယ်ခန္ဓာ၏အရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများတွင်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုတိုးပွားစေသည်။ ကတည်းကနို့ထွက်ပစ္စည်းဖြတ်တောက်ငါတိုးတက်မှုသတိပြုမိသည်ငါ့သိုင်းရွိုက်ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်စပ်နိုင်သည့်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်စွမ်းအင်အဆင့်များ။
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်နို့ထွက်ပစ္စည်းနို့တိုက်သတ္တဝါများဖြစ်သောနွားနှင့်ဆိတ်များမှထုတ်လုပ်သောအစားအစာများ (၁) ပါဝင်သည်။ အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်နို့နှင့်ဒိန်ခဲ၊ မုန့်၊ ထောပတ်နှင့်ဒိန်ချဉ်အပါအ ၀ င်နို့နှင့်လုပ်သောမည်သည့်အစားအစာကိုမဆိုရည်ညွှန်းသည်။
ဗိုက်အဆီကိုလောင်ကျွမ်းစေသောအစာ ၅ မျိုးမှာဘာဖြစ်သနည်း။
အစားအစာများနှင့်ကူညီသောပါဝင်ပစ္စည်းများဗိုက်အဆီကိုလောင်ကျွမ်းပါသစ်သီးများ၊ သစ်သီးဝလံများ၊ ငါးများ၊ ပန်းသီး cider ရှလကာရည်၊ resveratrol၊ သုတေသနပြုချက်အရကာဗွန်ဓာတ်နည်းပါးမှုနောက်ကိုလိုက်သူများလည်းရှိသည်အစားအစာသေးငယ်တဲ့ခါးလုံးပတ်ရှိခဲ့ပါတယ်ငါးမကျင့်သောသူတို့အားထက်နှစ်ပေါင်း။၁ ။ 2021 ။
၅။ နို့ထွက်ပစ္စည်းအခမဲ့စားသုံးခြင်းဖြင့်သင့်ကိုယ်အလေးချိန်လျော့ကျစေနိုင်သည် ၁ နို့သည်သကြားဓာတ်မြင့်မားသည်။ Lactose ကိုနို့ထွက်ပစ္စည်းများအားလုံးတွင်တွေ့ပြီး၎င်းသည်သကြားဓာတ်ဖြစ်သည်။ ၂ နို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်နိုင်သကဲ့သို့အာဟာရမဟုတ်ပါ။3ဖြစ်နိုင်သော Lactose ကိုသည်းမခံ။ ငါတို့ထဲကတချို့ဟာလုံးဝသတိမထားမိကြဘူး4Casein အူရောင်ရမ်းခြင်း။ ကာဇိုင်းသည်အဓိကပရိုတင်းဖြစ်သည်။
၃။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း။ နို့ထွက်ပစ္စည်းများကိုဖယ်ရှားခြင်းသည်ကိုယ်အလေးချိန်ကျစေသည်။ နို့၊ ဒိန်ချဉ်နှင့်အခြားမချိုသောနို့ထွက်ပစ္စည်းများသည်သကြားဓာတ်၊ သဘာဝသကြားဓာတ်ပါဝင်ပြီးအခြားနို့ထွက်ပစ္စည်းများတွင်သကြားထည့်နိုင်သည်။ သင်ခေါင်းမာသောဗိုက်အဆီဆုံးရှုံးရန်ကြိုးစားနေပါကသကြားဓာတ်များအားလုံးကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းသည်အမှန်ပင်အကူအညီဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဤအတောအတွင်းသင်သည်နို့နှင့်နို့နှင့်ဓာတ်မတည့်ပါက (သိလျက်ဖြစ်စေ၊ မသိဘဲဖြစ်စေ) အကယ်၍ သင်သည်အစားအစာအုပ်စုကိုပေါင်းစပ်ခြင်းကဖောင်းပွမှုကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဒါပေမယ့်သတိရပါ၊ ရေရှိရင်အဆီမဟုတ်ဘဲကိုယ်အလေးချိန်ကျမယ်၊